Ninka markuu arko gabar buuran oo foorarsan | Gaaloos.com
Home » galmada » Ninka markuu arko gabar buuran oo foorarsan
Ninka markuu arko gabar buuran oo foorarsan
Caashaqa naagaha dhuuban maxaa faafiyay? waagii hore dadka waxay jeclaan jireen naagaha buuran, markaad akhrinayso buugaagta hore waxaad arkaysaa in amaanayo naagta dabada weyn iyo midda naasaha weyn leh, qurux ayaa lagu tilmaami jiray, xadaaradihii hore ayaa sidaa ku tilmaamay naagta, marka waxaa arinta ku dheelay reer galbeedka.
Waxay faafiyeen dumr iyo rag iswaaya oo flin dhigay si loo soo saaro naagta inay tahay midda dhuuban, tan buuran inaysan naagba ahayn, guud ahaan quruxda soo jiidashada waa dooq, naagta buuran iyo naagta caatada ah ninka ayay ku xiran tahay midda uu ka helayo.
Raga waxay u badan yihiin inay raadiyaan naagaha buurbuuran oo dabada weyn iyo naaso waaweyn leh, raga marka ay arkaan naag futadeeda ruxanayso way u kacsadaan, laakin naagta dhuuban raga inta badan ma dhaqaajiso, xitaa haddii ay qaawan tahay, laakin midda hilibka leh, marka ay dharka soo dhigato, ama dadka hortooda ay ku foorarsato ninka isla markii ayuu dareeayaa.
Title: Ninka markuu arko gabar buuran oo foorarsan